I-Ambience: Izincomo ezifanele zomkhiqizo kokuqukethwe | Martech Zone
I-Ambience: Izincomo ezifanele zomkhiqizo kokuqukethwe
NgoLwesine, July 24, 2014 NgoLwesine, July 24, 2014 Douglas Karr
Kunomhlaba wokuqukethwe laphaya okhula nsuku zonke. Iningi lecebo lokumaketha umkhiqizo ukuthola ukubuyekezwa komkhiqizo kusatshalaliswe kuyo yonke iwebhu, ukuheha labo bafundi emuva ekhasini lomkhiqizo bese ucindezela umfundi ukuthi aguqule. Ipulatifomu kaSophia ye-ecommerce i-Ambience ™ ifaka isithombe nezincomo zomkhiqizo kokuqukethwe - okulungiselelwe ukubukwa futhi kuyahambisana nokuqukethwe okuxoxwayo. Lokhu kushayela amazinga okuguqulwa aphakeme kakhulu kusiza seSophia.
I-Ambiance ™ iwijethi ye-e-commerce ehlala ngokungaqondile eceleni kokuqukethwe komshicileli ukubonisa ngokuzenzakalela imikhiqizo efanelekile enentshisekelo kubafundi ngenkathi bephequlula. Ngokwenza okuqukethwe kuthengwe kalula, kunikeza okunye ukusakazwa kwemali engenayo kubashicileli futhi ngoba imikhiqizo ihambisana nokuqukethwe okuseduze, abafundi bahlanganyela ngokushesha okukhulu okuholela ekunciphiseni kwesayithi nokuthembeka okwandisiwe.
Lokhu kungukuthuthuka okuthakazelisa kuwebhu, ukuhlanganisa ulwazi lwamakhasi womkhiqizo nezindawo zokuthenga ngolwazi kanye nomongo wokuqukethwe okuhle. Abashicileli ababhala okuqukethwe okuhle bangakwenza imali kangcono ngakho. Futhi amasayithi e-ecommerce anemikhiqizo anethemba lokuyikhangisa kumasayithi wokushicilela manje anethuba lokwenza imikhiqizo yabo ibonwe futhi ichofozwe.
Tags: abakhangisiambienceokuqukethwe okunikwe amandla kokuqukethweiwijethi ye-e-commerceiwijethi ye-ecommerceizincomo zomkhiqizoabamemezelisophia
Thenga i-Spot Yakho: Uhlelo lokusebenza lwamadili weselula olwakhelwe umthengi